संसदमा नेकपा दुई समूहको भूमिका कस्तो ? Global TV Nepal
झापामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि देखियो ओमोक्रन भेरियन्ट जितपछि लिङ्देनले भने तपाईंहरुको शीर झुक्न दिन्नँ कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको सभापतिमा बानियाँलाई प्रधानको समर्थन को हुन् लिङदेन,जो लोकपृय मतका साथ राप्रपाको नेतृत्वमा पुगे ? आगामी चुनावमा एमाले भन्दा एकीकृत समाजबादी ठूलो दल बन्छ-खतिवडा बागमती कांग्रेस सभापतिमा ५१ प्रतिशत मत नपुगेपछि पुनः मतदान प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा कांग्रेस र जसपा
लालकुमार मोक्तान । पुनस्र्थापनापछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकका लागि दुई वटा कार्यसूची आईसकेको छ । पछिल्लो पटक जारी भएको कार्यसूची अनुसार सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने अनी सदन विघटन भए यता मृत्यु भएका सांसद र पूर्व सांसदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरी बैठक समापन गर्ने तयारी छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादका कारण आजको बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् की दिदैनन् वा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा बढी चासो छ । यद्यपी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूह, मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक अर्काको रणनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने र सोही अनुरुप अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री विरुद्ध यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर भएपनि हटाउने भनेर उसले दवाव वढाई रहेको छ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ग्लोवल टेलिभिजनसंगको कुराकानीमा भने,‘आइतबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
उहाँले राजीनामा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ । ’उनले भने, ‘ओलीले राजीनामा नदिए यसअघि पनि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ । सोही अनुरुप अन्य दलसँगको परामर्शका साथ अगाडि बढ्छौँ ।’ तर, दाहाल–नेपाल समूह भनेजस्तै सजिलै राजीनामा दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली देखिदैनन् । ओली समूहका नेता खिमलाल भट्टराई भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको दिने स्पष्ट पारे ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदमा नेकपाका दुवै समूहले खेल्ने भूमीकालाई हेरेर मात्रै अघि बढ्ने रणनीतिमा छ । नेकपाका दुवै समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसअघि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर, पार्टी भित्र देउवालाई रोक्न रामचन्द्र पौडेल पक्ष लागि परेको र नेकपा विभाजन नभएकाले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि हाल्ने पक्षमा कांग्रेस छैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको सत्ता समिकरणमा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा रहने प्रस्टै छ ।
तर, नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाएको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस पर्ख र हेरको स्थितिमा नै रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । संसद पार्टीको भूमिका के हुने भन्ने बारे कांग्रेस तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
संसदको तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि काँग्रेस जस्तै जसपा पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा नै छ । जसपा महासचिव लक्ष्मणलाल कर्णले भने,‘नेकपा कानुनत विभाजन भइसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा कुनैपनि समुहलाई साथ दिन सकिदैन । आजको संसद बैठकमा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यही अुनसार हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ ।’
दलहरुको अनुमान विपरित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा आइतबार प्रक्रिया अगाडि नबढी बैठक स्थगित हुने सम्भावना पनि छ । संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अविश्वास प्रस्ताव वारे उल्लेख छैन । बाहिर हल्लाभए जस्तो नभएर सामान्य अवस्थामा नै आइतबारको बैठक सञ्चालन हुने संसद सचिवालयले दावी गरेको छ ।
सरकार गठन गर्न सात देशले तालिबानसँग गरे आग्रह
प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा काग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप